DEG DEG+XOG:Axmed Madoobe oo dhexda u galay Cabdi iley & RW Abiy Ahmed + Xalkii xiisadaha JigJiga oo gaadhay meel aan…. – Puntlandtimes
NAIROBI(P-TIMES)-Xoggo hoose oo Warsidaha Puntlandtimes.com uu ka helayo magaalada JigJiga ee caasimada dowladd deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa sheegaya in uu gaadhay magaalada Addis Ababa ee caasimada dalka Ethiopia uu gaadhay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe).
Ujeedka safarka Axmed Madoobe ayaa salka ku haya xal u raadinta xiisadaha ka dhex aloosan dhinacyada madaxda dowladd deegaanka Soomaalida Ethiopia iyo kuwa dalkaasi.
Puntlandtimes.com ay heshay xoggo tibaaxaya in Axmed Madoobe uu casuumad ka helay xafiiska Ra’iisal wasaaraha dowladda Ethiopia saraakiil ka tirsan, kuwaas oo Axmed Madoobe u arkay in uu xal u noqon karo xiisadaha weli ka taagan deegaanka Soomaalida Ethiopia.
Axmed Madoobe ayaa la filayaa in uu talo ka siiyo dowladda Ethiopia arimaha JigJiga iyo xal u raadintooda, isagoona qaab qabiil ku gali doona xal u raadinta xiisadahaasi.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa xidhiidh fiican la leh dawladda Ethiopia iyo tan ismaamulka Soomaalida Ethiopia, waxaana uu fudud in uu garab walba ka dhagaysto cabashooyinkiisa, isagoona haatan dadaal fara badan ku bixinaya sidii loo dejin lahaa xiisada weli ka taagaan magaalooyinka waa weyn ee dowladd deegaanka Soomaalida Ethiopia.
kashaqsi ahan in dr. abiyi ahmed iyo mas,uvliyinta kale ay go,an kagadhen falalkan kadhcaya d.d.s.i.e farah kalabax